China ntụ ntụ ntụ igwe na-emepụta na ndị na-eweta ya | Xuanyi
Isi uru nke ntụ ntụ bụ na e ji ihe ntụ ntụ mee ya, ya mere bat mmanụ ebe ọ bụ na mmanu dị mma, ọdịdị ezé na nha niile nwere ike ịmalite, n'ozuzu ya abụghị nhazi ọzọ; Ihe ọghọm bụ na ikwu na nhazi ọdịnala. gia, ike ezughi oke, enweghị ike ịnyefe nnukwu torque, ezé ezé ziri ezi bụ n'ozuzu na 6 ~ 9 larịị, akụkụ ziri ezi bụ n'ozuzu kasị elu IT7 ~ 6 larịị.
Powder metallurgy bụ teknụzụ nrụpụta ọhụrụ, yana uru ya, ọkachasị maka imepụta oke. Ma ọ bụghị maka ọnọdụ ọ bụla. Powder metallurgical nhazi chọrọ imepụta nke kwekọrọ ekwekọ anwụ, na-eji powdery metal site sintering na kwekọrọ ekwekọ usoro na-eme ka akụkụ.The ike dịgasị iche iche dị ka ihe eji.
1. ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke ọla na ihe ndị dị na ha, alloys ụgha, ihe ndị na-abaghị uru nwere ike ịmepụta naanị site na usoro ntụ ntụ.
2. n'ihi na a ga-etinye usoro ngwongwo ntụ ntụ n'ime njedebe nke mkpokọta, na-enweghị ma ọ bụ obere mkpa maka nhazi nhazi ọzọ, ọ nwere ike ịchekwa igwe, belata ọnụahịa ngwaahịa .Ọfu ọla na imepụta ngwaahịa site na ntụ ntụ. usoro bụ naanị 1-5%, ebe ọnwụ nke ọla na mmepụta nke ngwaahịa site na usoro mgbatị nkịtị nwere ike ịbụ 80%.
3. n'ihi na ntụ ntụ ntụ ntụ na usoro mmepụta ihe anaghị agbaze ihe ahụ, ọ naghị atụ egwu ịgwakọta na adịghị ọcha nke ọkpụkpọ na deoxidizer wetara, a na-ejikwa nsị nsị na-eme ihe na-enweghị ntụpọ ma na-ebelata ikuku, ọ bụghị ịtụ egwu oxidation. , ma ghara inye mmetọ ọ bụla na ihe ahụ, ọ ga-ekwe omume ịme ihe dị ọcha dị elu.
4. uzuzu metallurgy usoro nwere ike hụ na nke ziri ezi na ịdị n'otu nke ihe mejupụtara ruru.
5. uzuzu metallurgy adabara maka mmepụta nke otu udi na ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ngwaahịa, karịsịa gia na ndị ọzọ na elu na-akwụ ụgwọ nke ngwaahịa, na ntụ ntụ metallurgy n'ichepụta nwere ike belata ihe mmepụta cos.
Ike nchịkwa nke ngwaahịa ntụ ntụ ntụ ntụ n'oge ọgwụgwọ ọkụ:
Osote: Ngwá Ọrụ Igwe Ngwá Ọrụ Ngwaọrụ Ngwa Ngwa Ngwa